Ogaden News Agency (ONA) – Qiimayntii ugu sarraysay ee Halganka Ogadenya kasocda waxaa sameysay!
Qiimayntii ugu sarraysay ee Halganka Ogadenya kasocda waxaa sameysay!
Qiimayntii ugu sarraysay ee Halganka Ogadenya kasocda waxaa sameysay- Marwo Safiya Cabdi Maxamed
Waxaa jira wax ay ka simanyihiin dhamaan xaq udirirku meel ay joogaan iyo qarni ay joogaamba Gaal iyo Muslim kuu doono ha ahaadee. Cid kasta waxay jeceshahay inay xaqeeda hesho, waxayna necebtahay in la dulmiyo oo dadkeeda iyo duunyadeeda laga boobo. Inta badan gardarrada iyo xad gudubku waxuu ka yimaadaa xaga midka is mahadiyay ee xoogaa aduunyadu isugu aaday, waxaana asal u ah hunguriga oo ka waynaada isagoo u arka inuu leeyahay waxa dadka tabar yar gacmahooda kujira!
Hardanka taariikhda galay waxaa ka mid ahaa kii dhex maray Maraykanka iyo Fiidnaam waxaa la ogyahay inayna isku awood ahyn markii laga eego dusha sare, hase yeeshee kii awoodda is bidayay oo Maraykan ahaa waxaa gaadhay dhaawac iyo sumcad xumo taariikhda ugalay!
Guusha sideedaba waxaa iska leh cida la dulmiyay waa haday mintido, lamana soo koobi karo taariikhaha ka dhashay arrinkaas.
Halganka lagu baadi goobayo xornimada dalka Ogadenya ee itoobiya sida xaq darrada ah ugu hoos jira ayaa si wayn usoo jidanaya indhaha Soomaaliwayn maalimba maalinta ka dambaysa. In kasta oo dhaawac culusi soo gaadhay Midnimadii umadda somaliyeed oo dhexdooda raxmadii ku yaraatay hadana waayahan dambe waxaa hubaal ah inay kor usoo kacayso walaalnimadoodii iyo isku tiirsanaantoodii, taasoo ah wax lagu farxi karo.
Waxaa u dambeeyay warkii muuqaalka ahaa ee dhexmaray ILAYS TV iyo Marwo Safiya Cabdi oo muujisay inay si buuxda u garab taagantahay halganka ay ONLF hormuudka u tahay. Waxaan marna la qiyaasi karin xikmadaha ay gabadhaasi soo gudbisay, waxaana iila miisaan waynaa markay leedahay (Waxaa guul ahaa in dhulka loo bixiyay magaca qabiil somaliyeed oo ah OGADEN, hadiise loo bixin lahaa OROMO sow maynaan ahaaneen dad gardarro ku socda). Kollay ilaahay ayaa fahanka qaybiya, waxaase dhab ah inay soomaali badani qalad ka fahantay qodobkaa isaga ah. Waxaan jeclaaan lahaa inuu hadalkaas ama mid la mid ahi ka baaho warbaahinta la iska arko ee soomaaliwayn hadii fursad loo helo.
Marwo Safiya oo kasoo jeedda Gobolka Galguduud Waxay ka sameysay halganka ONLF taxliil ama qiimayn aad u heer sarraysa iyadoo shaambad ku dhufatay ama saxiixday inuu Waddo sax ah ku taaganyahay geeddi socodka halganka ONLF. Si kastaba ha ahaatee aad bay u mahadsantahay Marwo Safiya Ilaahayna ha barakeeyo Aqoonteeda.
Isku soo duuboo halganka xornimo doonka ah ee Ogadenya kasocda ayaa noqday mid lagu imtixaamayo soomaaliwayn waxaana muuqata in qaarkood imtixaankii ku dhaceen qaarna ku baaseen!
Fikradan waxaa xuquudeeda iska leh ama Khaas u tahay Qoraaga ku saxeexan